Isco oo si jees jees ah kaga hadlay wararka ku aadan in isag iyo Ramos aysan wada hadlin in mudo ah – Gool FM
Isco oo si jees jees ah kaga hadlay wararka ku aadan in isag iyo Ramos aysan wada hadlin in mudo ah
Dajiye January 23, 2019
(Real Madrid) 23 Jan 2019. Kubad sameeyaha kooxda Real Madrid Francisco Isco ayaa si jees jees ah kaga soo hadlay sawirka uu saaxiibkiis iyo kabtanka kooxda Real Madrid soo dhigay boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka.
Waxaa jiray warar ku aadan in aysan wada hadlin, Francisco Isco iyo kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos.
32 jirkaan reer Spain ee Sergio Ramos ayaa sawirkiisa soo dhigay boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka, wuxuuna jawaab celin cajiib ah ka helay saaxiibkiis kooxda Real Madrid ee Isco.
Sergio Ramos ayaa sawirka uu soo dhigay boggiisa Instagram-ka waxaana kasoo hadlay Francisco Isco wuxuuna yiri:
“Ma ogtahay inaanan wada hadlin aniga iyo adiga”- “Tani waa arin qof uun uu ku fikiray”.
Warar badan ee dhawaan soo baxay ayaa waxay sheegayeen in uu khilaaf xoogan ka dhexeeyo labada xidig kooxda Real Madrid Francisco Isco iyo Sergio Ramos, isla markaana aysan wada hadlin mudo aad u fog.